November 2018 – Deuralisamachar
नेपाललाई बिश्वसामु चिनाउने शृंखलाको अग्रता कायमै, अझ धेरै भोटका लागि सक्दो सेयर गरौं !
काठमाडौं । नेपाल एक आफैंमा सुन्दर देश हो संसारका जो कोही मानिस नेपाल हेर्न चाहान्छन । आज हामी यही देशको वातावरणमा हुर्किएर विश्व सुन्दरीको ताज जित्न तयार शृंखला खतिवडाको कुरा गरिहरहेका छौं । “मिस वर्ल्ड” खतिवडा यतिबेला सबै नेपालीहरुको आसाको केन्द्रबिन्दु बनिरहेकीछिन् । उनी यतिबेला “मिस वर्ल्ड २०१८” को प्रतिस्पर्धाका लागि चीनमा रहेकी छिन् । त्यसमाथि पनि शृङ्खला मिस वर्ल्डको यात्रामा विश्वभरीका सुन्दरी प्रतियोगिताका प्रेडिक्टरहरुले नेपाललाई पहिलो पटक टप १० , ५ हुँदै टप ३ भित्र राखेका छन् । जुन शृङ्खलालाई मिस वर्ल्डको उपाधीका लागि सहज बनाउँन सक्छ । किनकी यसअघि नेपालका कुनै पनि सुन्दरीहरु प्रेडिक्टरहरुको नजरमा परेका थिएनन् । यही कारण पनि यतिबेला श्रृङखलाको चर्चा थप चुलिएको छ । यसपटक श्रृंखलालाई कडा प्रतिस्पर्धीको रुपमा उभाइएको छ । त्यतीमात्र होईन उनी भोटिङमा पनि सबैभन्दा अगाडी रहेकीछिन् । भ
प्रधानमन्त्री ओलीले सोधे- अझै सरकार देख्नुभएन?
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तामझामसाथ सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको शुभारम्भ सरकारले देखाउनकै लागि गरेको बताएका छन्। राजधानीमा मंगलबार सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको शुभारम्भ गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारका आगामी कार्यक्रम नौमती बाजा बजाएर गरिनेसमेत बताए। ‘भोलि विरोध आउँछ, भोलि भन्नेछन्- तामझाम किन?’, ओलीले भने, ‘यो तामझाम (सरकार)देखिनँ, थाहा पाइनँ भन्नेलाई देखाउन हो, अब त देख्नुभयो होला।’ उनले सरकारले अबका योजनाहरू यसैगरि तामझाम साथ जानकारी गराउने बताए। ‘अब नेपाल तामझाम र खुसियालीका साथ हुन्छ…आज नौमती बजाएको छैन’, ओलीले भने, ‘अरू कार्यक्रम नौमती बाजा साथ हुन्छ।’ प्रधानमन्त्री ओलीले पत्रपत्रिकामा ‘सरकार हरायो’ भनेर सोधिएको भन्दै कार्यक्रममा जवाफ फर्काए। ‘सरकारले सिन्को भाँचेन भने। जुम्रा पनि मारेन भनिन्छ’, ओलीले भने, ‘सरकार सिन्का भाँच्न पनि होइन। जुम्रा मार्न होइन। सरकार दे
विदेशीले नेपाल घुम्दा १५ अर्व खर्च गरे, नेपालीले विदेशमा २९ अर्व
पछिल्लो तीन महिनामा विदेशी पर्यटकले नेपालमा गरेको खर्च र नेपालीले विदेशमा गरेको खर्चले पर्यटनको नयाँ तस्वीर देखाएको छ। विदेशीले नेपालमाभन्दा हामी विदेशमा घुम्न जादा धेरै खर्च गर्छौ। नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्याकं अनुसार साउनदेखि असोजसम्म पर्यटकले नेपालमा १३ करोड ७७ लाख अमेरिकी डलर अर्थात झण्डै १५ अर्व रुपैयाँ खर्च गरेका छन्। राष्ट्र बैंकका अनुसार यीनै तीन महिनामा बिदेश घुम्न जाने नेपालीहरूले २५ करोड ९२ लाख डलर अर्थात झण्डै २९ अर्व रुपैयाँ खर्चिएका छन्। पहिल्लो तीन महिनाको तथ्याकंले त झन् विदेशीले पर्यटकले नेपालमा गर्ने खर्च घटिरहेको र नेपालीले विदेशमा गर्ने खर्च बढिरहेको देखाएको छ। अघिल्लो वर्षको तुलनामा नेपालमा विदेशीले पर्यटकले गर्ने खर्च ४.३ प्रतिशतले घटेको छ। नेपालीले विदेशमा घुम्न जाँदा गर्ने खर्च भने २७ प्रतिशतले बढेको छ। अघिल्लो वर्ष यी तीन महिनामा नेपालीले घुम्न
उपत्यकामा बिहिबारदेखि आइतबारसम्म जोर विजोर नम्बर प्रणाली लागू
आगामी बिहिबारदेखि आइतबारसम्म काठमाडौंमा जोर विजोर नम्बर अनुसार गाडी चल्ने भएका छन्। शुक्रबारदेखि सोमबारसम्म हुने एसिया प्यासिफिक समिट क्रममा सवारी जाम नहोस् भनेर जोर विजोर नम्बरका आधारमा निजी तथा सार्वजनिक गाडी चलाउने तयारी भएको महानगरिय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले जनाएको छ। महाशाखाका अनुसार मंसिर १३ गते बिहिबार र मंसिर १५ गते शनिबार नम्बर प्लेटको अन्तिम अंक विजोर (१,३,५,७,९) भएका गाडीमात्रै चल्न पाउनेछन् भने मंसिर १४ गते शुक्रबा र मंसिर १६ गते आइतबार जोर (०,२,४,६,८) अंक भएका गाडी मात्रै चल्न पाउनेछन्। Source: Setopati.com
आज सम्म अरुको लागि धेरै शेयर गर्नु भयो। धेरै भोट गर्नुभयो। आउनुहोस आज देशको लागि एक भोट र शेयर गर्नुहोला।
यो पोस्ट सबै नेपाली समक्ष सेयर गरेर पुराइदिनुहोला (share share ) #Important_Notice #Share_onGroup हिजो सम्म ४०.०१ % भोटिङ भएको मा आहिले घटेर ३६.६१% मा झरेको छ । र नेपालको भोट घट्ने क्रममा छ ! अन्य प्रतिस्पर्धाीको बढ्दै गएको छ । नेपाललाई अझै धेरै भन्दा धेरै भोट को आवश्यकता हुन्छ ! धेरै जनालाई भोट गर्ने तरिका अझै थाहा नभएको हुनाले तल भोट गर्ने तरिका हेर्नुहोला !! यो पोस्ट चारैतिर सेयर गर्नुहोला । जति सक्नुहुन्छ सेयर गर्नुहोला! ( vote & Share &Boost) Miss world 2018 #shrinkhala ???♥️ #missworld2018Nepal ?? ?? ?? #goodLuckNepal ? Shrinkhala Khatiwada vote गर्ने तरिका तलका चार तरिका बाट भोट गर्नुपर्छ! 1. https://missworld.com/#/vote (direct लिन्क खोल्नोस र vote option मा जानोस र shrinkhala khatiwada खोज्नोस र vote गर्नोस। एक आइडी बाट एक पटक मात्रै भोट हुन्छ त्यसैले धेरै प
यो पोस्ट सबै नेपाली समक्ष सेयर गरेर पुराइदिनुहोला
राज्यको ढुकुटीको दुरुपयोग : जनताद्वारा चर्को विरोध भइरहँदा पनि राष्ट्रपतिका लागि गाडी ल्याउने तयारी
काठमाडौं– सरकारले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई ‘अनौपचारिक’ सवारीका लागि टोयोटाको गाडी खरिद गर्न प्रतीतपत्र खोलेको छ । यो समाचार आजको अन्नपूर्ण पोस्ट्मा छ । महँगो लिमोजिनका सट्टा तीन वटा हाइल्यान्डर किन्न लागिएको हो । त्यसमा एक बुलेटप्रुफ, अर्का दुई वटा बुलेटप्रुफ जस्तेै देखिने ‘फुलअप्सन’का विलासी गाडी हुनेछन् । गाडी खरिदलाई लिएर चर्को विरोध भइरहँदा पनि सरकारले थाइल्यान्डको ओरा इन्टरट्रेड कम्पनी लिमिटेडमार्फत गाडी ल्याउने तयारी गरेको छ । नेपालमा टोयोटा गाडी बिक्री गर्दै आएको वैद्य अर्गनाइजेसनले यसमा सहजीकरण गरेको छ । यसको ओरासँग सीधा सम्बन्ध छ । Source: Ratopati.com
बुवाले दोस्रो बिहे गरेपछि ५ वर्षीय बालक दुई वर्षदेखि दाम्लोमा
फिदिम– पाँचथरको मिक्लाजुङ– ५ पाङ्तुवाकी शिला चेम्जोङले दोस्रो बिहे गरेपछि उनका नाबालक छोरा दाम्लोमा बाँधेर राखिएका छन् । यो समाचार आजको अन्नपूर्ण पोस्ट्मा छ । हजुरबुवा भुवनसिंह सम्बाहाम्फे र हजुरआमाले पाँच बर्षीय मित्रहाङलाई दुई वर्षदेखि ओखलीमा बाँधेर राखेका हुन् । उनका बुवा आसिकराम विदेशमा छन् । उनको दायाँ खुट्टा दाम्लोले बाँधिएको छ । उनी दाम्लो खोल्ने प्रयत्न गरिरहन्छन् । नसकेपछि उनी रुँदै चिसो भुँइमा लडिबुडी गर्छन् । Source: Ratopati.com
आफ्नो शरीरमा क्यान्सर भए/नभएको आफै पत्ता लगाउने ७ तरिकाहरु हेर्नुहोस!! [पढेर सेयर गर्नुहोला]
नेपालमा ८० प्रतिशत क्यान्सरका बिरामी अन्तिम अवस्थामा मात्रै अस्पताल पुग्ने गरेका छन् । समयमै चिकित्सकलाई आफ्नो समस्याबारे नबताउँदा क्याम्सरको उपचार जटिल बन्ने गरेको छ । चाँडो अस्पताल नजाने हाम्रो बानी नै छ । त्यसैले आफैले क्याम्सर भए नभएको बारे कसरी पत्ता लगाउने भनेर तपाईलाई जानकारी दिदैछौँ । बरिष्ठ क्यान्सर रोग विशेषज्ञ डा राजेन्द्र प्रसाद बरालले शरिरमा क्यान्सर रोग भए÷नभएको यसरी पत्ता लगाउन सकिने भनेका छन् । १) निको नहुने खोकी लागेमा अथवा घोक्रो स्वर भएमा, २) छालामा भएको कोठीको रङ्ग र आकार परिवर्तन भएमा, ३) शरीरको भाग अत्याधिक दुख्न थालेमा वा शरीरमा गिर्खा आएमा, ४) उपचार गर्दा पनि शरिरमा लागेको घाउ निको नभएमा वा बल्झीएमा, ५) शरिरबाट असाधारण रक्तस्राव वा पिप आएमा, ६) दिशा वा पिशावमा गर्ने समयमा फरक आएमा वा गाह्रो भएमा अथाव दिशा पिशाब गर्दा रगत देखिएमा, ७) विस्तारै शरिरको वजन
छिटो फर्किनुहोस् नेपाल, पाउनुहुन्छ सिधै १० लाख, नेपाल सरकारले यस्तो सम्मको व्यवस्था गर्यो [पढेर सेयर गर्नुहोला]
काठमाडौं : वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवाले १० लाख रुपैयाँसम्म ऋण पाउने भएका छन्। स्वदेशमै व्यवसाय तथा उद्यमशीलता विकास गर्न सरकारले १० लाखसम्म सरल कर्जा दिने भएको हो। वैदेशिक रोजगारीबाट युवालाई फर्काइ स्वदेशमै उद्यमशीलता निर्माण गर्न सरकारले दुई प्रतिशत व्याजमा ऋण दिन लागेको हो। वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डले सरल कर्जा लिनका लागि सूचना आह्वान गरिसकेको छ। बोर्डले आउँदो पुस मसान्तसम्म निवेदन पेश गर्न वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका व्यवसाय गर्न इच्छुक युवालाई अनुरोध गरेको छ। बोर्डका सूचना अधिकृत दिनबन्धु सुवेदीका अनुसार व्यवसाय परियोजना धितो राखेर उनीहरुले ऋण पाउने छन्। कम्तीमा पनि ६ महिना विदेश बसेको र फर्केको तीन वर्षभित्र ऋण लिइसक्नुपर्ने छ। विदेशबाट फर्केकाहरुले आफूले सिकेको ज्ञान, सीपका आधारमा फारम भरी निवेदन पेश गर्नुपर्ने छ। उद्यमशीलता बढाउन, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र बनउन, वैदे